DWG Iweghachite Ngwá Ọrụ. AutoCAD Mmezi & Iweghachite Software.
DataNumen DWG Recovery bụ kasị mma AutoCAD DWG ịrụzi na mgbake ngwá ọrụ na ụwa. Ọ nwere ike ịrụzi AutoCAD rụrụ arụ DWG faịlị ma gbakee ọtụtụ data gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ aka na faịlụ.
4.90 / 5 (site na 1,618 votes)
Gịnị mere DataNumen DWG Recovery?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke a DWG ngwaahịa mgbake. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen DWG Recovery nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị mma karịa ndị asọmpi ndị ọzọ n'ahịa!
Mụtakwuo banyere otu DataNumen DWG Recovery na-ese anwụrụ mpi
Ngwọta maka ịgbaso njehie AutoCAD N'ihi nrụrụ aka DWG files
Ngwọta maka "ịbịaru faịlụ adịghị irè" Error
Ngwọta maka "Error Internal !dbqspace.h@410: eOutOfRange" Error
Ngwọta maka “Ndị na-abụghị Autodesk DWG”Njehie
Main Akụkụ na DataNumen DWG Recovery v3.0
Nkwado iji weghachite AutoCAD R14 na 2021 DWG faịlụ.
Nkwado iji weghachite ihe ndị a DWG faịlụ: BLOCK, POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, SPLINE, XLINE, RAY, SOLID, 3DFACE, LWPOLYLINE, POLYLINE (2D), POLYLINE (3D), POLYLINE (PFACE), POLYLINE (MESH), VER , VERTEX (2D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, (B (R ((DBỌCH)) ALIGNED), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 3-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), Onye ndu, ndidi, BLOCK CONTROL OBJ, BLOCK HEADER, LAYER CONTROL OBJ, LAYER, STAY STYLE, LTYPE CONTROL OBJ, LTYPE, VIEW CONTROL OBJ, VIEW, UCS CONTROL OBJ, UCS, VPORT CONTROL OBJ, VPORT, APPID CONTROL OBJ, APPID, DIMSTYLE CONTROL OBJ, DIMSTYLE.
Nkwado iji gbakee lost & achọtara ihe na DWG faịlụ.
Nkwado iji weghachite ihe ehichapụ na DWG faịlụ.
Nkwado iji weghachite DWG na-ese si temporary faịlụ mgbe ọdachi data mere.
Nkwado iji wepụta faịlụ echekwara na DWG usoro na DXF usoro.
Nkwado iji wepu faịlụ edozi na AutoCAD R14 na usoro 2017.
Nkwado ịrụzi DWG faịlụ dị na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi otu ogbe DWG faịlụ.
Nkwado ịchọta ma họrọ DWG faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụkwa AutoCAD DWG faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
iji DataNumen DWG Recovery iji weghachite AutoCAD rụrụ arụ DWG Files
Mgbe AutoCAD gị DWG faịlụ na-emerụ ma ọ bụ mebiri emebi ma ị nweghị ike imeghe ha nke ọma, ịnwere ike iji DataNumen DWG Recovery i scanomi ihe DWG faịlụ na-agbake dị ukwuu data ha ka o kwere mee.
Cheta na: Tupu na-agbake ọ bụla rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi dwg faịlụ na DataNumen DWG Recovery, biko mechie ngwa ndị ọzọ nwere ike gbanwee ya dwg faịlụ.
Họrọ rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi dwg faịlụ ga-natara:
Nwere ike itinye ihe na dwg aha faịlụ ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ chọta dwg faịlụ na-natara na mpaghara kọmputa.
Ọ bụrụ na ị maara usoro nke isi iyi mebiri emebi DWG faịlụ, ị nwere ike ịkọwapụta ya na igbe ngwakọta:
Site ndabara, ọ na-setịpụrụ na "Nchekwa onwe kpebisiri ike", nke pụtara DataNumen DWG Recovery ga-enyocha ma chọpụta usoro ya na akpaghị aka.
Ugbu a a na-akwado usoro ndị a maka isi mmalite DWG faịlụ:
Site na ndabara, DataNumen DWG Recovery ga-azọpụta ofu dwg faịlụ n'ime faịlụ ọhụrụ aha ya bụ xxxx_fixed.dwg, ebe xxxx bu aha isi mmalite dwg faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, maka isi mmalite dwg faịlụ mebiri emebi.dwg, aha ndabara maka faịlụ edozi ga-emebi emebi_fixed.dwg. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Ọ bụrụ na mmepụta ofu faịlụ nwere.DWG ndọtị, mgbe ahụ DataNumen DWG Recovery ga -puputa ya n'ime DWG usoro.
Ọ bụrụ na mmepụta ofu faịlụ nwere .DXF ndọtị, mgbe ahụ DataNumen DWG Recovery ga -puputa ya na DXF usoro.
Nwere ike ezipụta mmepụta ofu faịlụ Ọkpụkpọ ke ngwakọta igbe:
Site na ndabara, ọ bụrụ na ịchọghị ịmepụta usoro mmepụta faịlụ, mgbe ahụ DataNumen DWG Recovery ga-eji otu usoro dị ka isi iyi DWG faịlụ.
Ugbu a a na-akwado usoro mmepụta ndị a:
bọtịnụ, na DataNumen DWG Recovery ga start na-enyocha ma na-agbake isi iyi dwg faịlụ. Ogwe ọganihu
Mgbe mgbake usoro, ọ bụrụ na isi iyi dwg faịlụ nwere ike natara nke ọma, ị ga-ahụ a igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu dwg faịlụ na AutoCAD ma ọ bụ ndị ọzọ dwg ụlọ ọrụ.
DataNumen DWG Recovery A tọhapụrụ 3.0 na Mee 3, 2021
DataNumen DWG Recovery 2.1 weputara na Disemba 16th, 2020
DataNumen DWG Recovery A na-ahapụ 1.9 na November 4th, 2020
DataNumen DWG Recovery A tọhapụrụ 1.8 na June 30, 2020
Nkwado iji weghachite AutoCAD 2018 na 2021 DWG faịlụ.
DataNumen DWG Recovery A na-ahapụ 1.7 na November 19th, 2019
DataNumen DWG Recovery A na-ahapụ 1.6 na Eprel 19, 2018
Nkwado iji weghachite AutoCAD 2015 na 2017 DWG faịlụ.
DataNumen DWG Recovery A tọhapụrụ 1.5 na Mee 29, 2014
Nkwado iji weghachite AutoCAD R14 na 2003 DWG faịlụ.
DataNumen DWG Recovery A tọhapụrụ 1.1 na March 31, 2014
Nkwado iji weghachite AutoCAD 2004 na 2006 DWG faịlụ.
DataNumen DWG Recovery 1.0 wepụtara na Jenụwarị 7, 2014
Nkwado iji weghachite AutoCAD 2010 na 2014 DWG faịlụ.
Nkwado iji weghachite ihe ndị a DWG faịlụ: BLOCK, POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, SPLINE, XLINE, RAY, SOLID, 3DFACE, LWPOLYLINE, POLYLINE (2D), POLYLINE (3D), POLYLINE (PFACE), POLYLINE (MESH), VER , VERTEX (2D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, (B (R ((EGO), DBỌCH (()BỌCH)) ALIGNED), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 3-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), onye isi, ndidi, BLOCK CONTROL OBJ, BLOCK HEADER, LAYER CONTROL OBJ, LAYER, STAY STLLE, LTYPE CONTROL OBJ, LTYPE, VIEW CONTROL OBJ, VIEW, UCS CONTROL OBJ, UCS, VPORT CONTROL OBJ, VPORT, APPID CONTROL OBJ, APPID, DIMSTYLE CONTOL OBJ, DIMSTYLE
Nkwado iji wepụta faịlụ edozi na AutoCAD R2.5, R2.6, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 2000 ruo 2014.
Nkwado njikọta na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụzi Outlook DWG faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
Idozi na-agbake rụrụ arụ Photoshop image (PSD, PDD) faịlụ.